U-Spotify uyila ngokutsha icandelo leThala leencwadi kwaye wongeza iifilitha ezinamandla | IPhone iindaba
Abafana baseSpotify, kude nokuzinza ngokuba yeyona nkonzo yomculo idumileyo kwihlabathi 158 izigidi zabantu ababhalisile, bayaqhubeka nokongeza imisebenzi emitsha kuhlobo lwesicelo sezixhobo eziphathwayo kwaye uhlaziyo olutsha luya kukhutshwa kungekudala.
Olu hlaziyo lutsha lusinika, njengeyona nto intsha, uyilo olutsha lwegridi kwicandelo leThala leeNcwadi lakho, efanayo naleyo sinokuyifumana kwiphepha eliphambili kwaye sinokuthi sitshintshane noluhlu loluhlu njengangaphambili.
Enye into entsha efakiwe kolu hlaziyo, zezi Iifilitha ezinamandla esivumela ukuba sihambe kuqokelelo lwethu ngendlela ekhawulezayo yokufumana umxholo okhutshelweyo, iindlela ezintsha zokukhetha ukuze ukwazi ukufumana umxholo ngegama, ukulandelelana kwealfabhethi ... kunye nokubanakho kokumisa umxholo phezulu ukuze uhlale isandla.
Yintoni entsha kuhlaziyo olutsha lweSpotify lwe-iOS
Iifilitha ezintsha ezinamandla ukukunceda ujonge ingqokelela yakho. Khetha kwi-albhamu, igcisa, uluhlu lokudlalwayo, okanye ipodcast ukubona ukuba yeyiphi iaudi oyigcinileyo kwaye uyifane.
Ukhetho olungcono lokukhetha. Khetha ukujonga iaudio alfabhethi yakho, ngokudlala kwangoko, okanye ngegama lomdali. Ngoku ilungelelaniswe.
Ulawulo ngakumbi kunye nokufikelela ngokulula koko umameleyo. Khetha ukuya kuthi ga kuhlu lwadlalwayo, kwiialbham, okanye kwimiboniso yeepodcast ukuze uzigcine zikroziselwe ukufikelela kwangoko. Kufuneka uslayide umnwe wakho ngasekunene kwezi zinto ukuze ubone ukhetho "lokucofa".
Sebenzisa entsha umbono wegridi ukuhlela umxholo owuthandayo ngendlela ebonakalayo ngakumbi, kunye nezembozo ezinkulu zealbham, uluhlu lokudlala kunye neepodcasts.
Ukusuka eSpotify babanga ukuba olu hlaziyo lutsha izakuqala ukufikelela kubo bonke abasebenzisi kule veki izayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » U-Spotify uyila ngokutsha icandelo leThala leencwadi kwaye wongeza iifilitha ezinamandla
Kuthekani ukuba iSiri Remote entsha ivele kwiNkqubo yoKhangelo?